PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-30 - IMangosuthu isinikwe umyalelo wokuthi ilaxaze inkampani iKPMG
IMangosuthu isinikwe umyalelo wokuthi ilaxaze inkampani iKPMG
Isolezwe ngeSonto - 2018-12-30 - IZINDABA - LOYISO SIDIMBA
UMCWANINGI mabhuku usekhiphe umyalelo wokuthi iMangosuthu University of Technology (MUT), iyilaxaze inkampani ecwaninga amabhuku, iKPMG.
Lo myalelo ukhishwe umcwaningi mabhuku jikelele, uMnuz Kimi Makwetu.
Lokhu kulandela uphenyo olusukela ku-2009 ngombiko othinta le nyuvesi okhombisa ukungahambi kahle kokuhlolwa kwamabhuku akhona yile nkampani.
“Asinakho esingakusho ukuthi ngabe yisiphi isinyathelo esathathwa uma kungukuthi sikhona mayelana nokungagcinwa kwesethembiso phakathi kwezinhlangothi ezithintekayo,” kusho umbiko okhishwe ngowayengumphathi we-Unisa, uSolwazi Barney Pityana.
Ngokwalo mbiko, kuyethusa ukuthi iMUT yaqhubeka nokuthi isebenzise le nkampani yabacwaningibamabhuku phezu kokuthi yayisiyaliwe ngayo nguMakwetu.
Kwenzeka konke lokhu nje kuzokhumbuleka ukuthi iKPMG izithole isisenkingeni kulandela ukusebenzisana kwayo nezinkampani eziphethwe wumndeni wakwaGupta ozakhele igama elibi kuleli kuhulumeni nakwezamabhizinisi.
Ngenyanga edlule le nkampani okuyimanje isenkingeni, imemezele ukuthi izosabalalisa uR47 million ewuthole ngokwenza ucwaningo ezinkampanini zakwaGupta.
Ithe le mali izoyisabalalisa ezinhlanganweni ezingu-52 zomphakathi nakulezo ezingenzi nzuzo ezaziwa ngama NPO ezibambe iqhaza emkhakheni wazemfundo.
Ngonyaka odlule le nkampani yazibophezela ekutheni izonikela ngemali eyithole ngokusebenzisana nezinkampani zakwaGupta ngokuthi inikele kwezemfundo ngoR20 million, ozophinde futhi usize nasezinhlanganweni ezingenzi nzuzo ezilwa nenkohlakalo.